विकास र समृद्धिको सपना
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका, बाँडगाउँकी विष्णुकुमारी विकलाई निर्वाचनमा कसले जित्छ भन्ने कुरा त्यही महŒव लाग्दैन, जति महŒव कसले जितेमा आफ्नो गाउँघरका लागि के विकास गर्छ भन्नेमा लाग्छ ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा’ सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा के कति दल र उम्मेदवारले मत माग्न आए ? भन्ने प्रश्नमा विक शुरुमै खुलिनन् । सामान्य ग्रामीण परिवारकी महिला भए पनि उनी राजनीतिक कुरै नबुझ्ने खालकी भने होइनन् तर नचिनेका मान्छेको प्रश्नको उत्तर उनले भटाभट दिन चाहिनन् । नचिनेका मान्छेसँग खुलेर कुरा गर्न नचाहे पनि पानी मगाएर अँगेनामा बसेर ‘तपाईंलाई के भइदियो भने यहाँ विकास हुन्छ ? के के आवश्यकता छ ? हामी पत्रकारहरू हो, अथवा हामी तपाईंका कुरा दल र उम्मेदवारलाई पु¥याइदिन्छौँ भनेर भलाकुसारी गरेपछि उनी बिस्तारै खुल्न थालिन् । ’
स्थानीय उम्मेदवार गोकर्ण विष्टले ऊर्जामन्त्री हुँदा राम्रै काम गरेको पनि उनले थाहा पाएकी रहिछिन् तर उनी एमाले वा कुनै दलको कार्यकर्ता होइनन् ।
उनले के मा मत हाल्छिन् वा पहिला के मा हालेको भनेर हामीले सोधिहाल्ने आँट गरेनौँ तर गुल्मी जिल्लामा कुन दल वा उम्मेदवारको प्रभाव छ भनेर जान्ने हाम्रो हुटहुटी थियो । हालैको मत परिणाममा नेकपा (एमाले) का नेता विष्टले जितेको यो क्षेत्रमा विष्णुकुमारीले उल्टै सोधेकी थिइन्, ‘उनले भत्ता बढाउँछु भनेका छन् साँच्चिकै बढ्ला त ?’
विष्णुकुमारीलाई मुख्य समस्या खानेपानीको छ । उनको मात्र होइन नेपालका धेरै दूरदराजका गाउँमा खानेपानीको मुख्य समस्या छ । दुई घण्टासम्म उकालो ओरालो गरेर पानी ल्याउनुपर्छ । बुहारीहरू कहिलेकाहीँ बिहान चारै बजे उठेर पानी लिन जाँदा पनि पालो कुरेर गाग्री भर्नुपर्छ । साना–साना बच्चाहरू ममी नदेखेपछि रुन्छन्, हेर्न गाह्रो हुन्छ । ‘के यी उम्मेदवारले पानी लिफ्टिङ गरेर मुसिकोट डाँडोसम्म ल्याउँलान् त ?’ विष्णुकुमारीको यो प्रश्नको उत्तर पनि हामीले दिन सकेनौँ । यति मात्र भन्यौँ, ‘स्थानीय निकायले पनि पूरा गर्न सक्ला यो काम त, अर्काे कुरा सांसद हुनेवालाले पनि बचन दिएका छन् भने पानी तपाईंको आँगनमा आउनुपर्छ । ’
हामीले आफूहरू कुनै दलमा मत दिनुपर्ने भन्ने आग्रह नगरेपछि उनले यसअघिको निर्वाचनमा आफ्ना परिवारका चार सदस्यमध्ये दुई–दुई मत बाँडेर दुई फरक–फरक दललाई हालेको रोचक कुरा सुनाइन् । उनले सोझो शैलीमा भनिन्, ‘ढाँट्न जादिन्नँ, घराँ बुहारीहरूसहित चार जना छौँ, दुई जनाले एउटा पार्टी र दुई जना अर्को पार्टीलाई भोट दिएका हौँ, अब यसपालि सोचिसकेको छैन । ’ उनको यो इमानदार भनाइबाट लाग्यो, जनता भनेको विष्णुकुमारी जस्तै हुन् । निर्णायक मत पनि यिनै हुन्छन् । उनीहरूको अरू स्वार्थ छैन, मात्र विकास र समृद्धि ।
त्यसदिन साँझ हामी जिल्लाको क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार विष्टको चुनावी कार्यक्रम हुने स्थल इस्मामा जाँदै थियौँ । बाटोको यो रोचक कुराकानी उनलाई पनि अवगत गरायौँ । ‘जनताले अझै निर्णय गरिसकेका छैनन् । कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न पनि गरियो । विष्टले गम्भीर भएर भने, ‘म जनतासँग नजिक छु, उनीहरूको चाहना पूरा गर्नु नै मेरो अभीष्ट हो विष्टले भनेका थिए । सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका उनका अनगिन्ती योजना पनि जनताका बीचमा प्रस्तुत भएका छन् । अब काम गर्ने चुनौती उनमा थपिएको छ । विगतमा ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा प्रचार कमाएका उनले अब जनताका धेरै अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।
नभन्दै विष्टले नेपाली काँग्रेसका चन्द्रबहादुर केसीलाई राम्रै मतान्तरले पराजित गरेका छन् । यसअघि पनि विष्टले त्यहाँ जितेका हुन् । वाम गठबन्धनले जिल्लाका दुवै क्षेत्र र प्रदेशसभाका एकलौटी जित हासिल गरेको छ । पूर्वाधार विकास र सामाजिक काममा केही प्रगति भए पनि जनताका नयाँ–नयाँ आवश्यकता र चाहना बढिरहेका छन् । जनताको अपेक्षा समयअनुसार बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । विगतमा तीन क्षेत्र भएको गुल्मीमा हाल दुई क्षेत्र भएकाले पनि जनतालाई नेता र नेतालाई जनता चिन्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । हो सबै जिल्लाको समस्या हुनुपर्छ । जनताले नेताको अनुहार वा अरू माया खोजेका छैनन् । विकास र समृद्धि तथा स्थिरता खोजेका छन् । यो जनताले विवेक पु¥याएको एउटा स्थिति हो । जनताले न्याय गरेका कारण नवनिर्वाचित नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्छ । यो बुझाईलाई कार्य रूपमा ल्याउन ढिलाइ भएमा जनतामा निरासा उत्पन्न हुन खतरा उत्तिकै छ । अरू जिल्लाको हकमा पनि सायद यही कुरा लागू हुन्छ ।
निर्वाचन परिणामबाट देशभर दुईतिहाइ नजिक मत ल्याएका वाम गठबन्धनले जितको उन्माद र सत्ता स्वार्थमा नअल्मलिइ विष्णुकुमारीका सपना र चाहनालाई इमानदार भएर पूरै गर्नैपर्छ, अन्यथा अर्काे पटक उनीहरूले ‘खोइ हामीले कसलाई मत दिएर पो हामीलाई के हुने रहेछ र ?’ भन्दै राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रप्रति नै अनास्था बढाउन सक्छ । नयाँ–नयाँ दल उम्मेदवार खोज्न थाल्ने छन् । निर्वाचनले दलहरूको अवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिदिन्छ । विगतको निर्वाचनबाट पनि हामीले यसको अनुभव गरेको हो । यसपटक पनि दलहरूको फरक खालको उपस्थिति देखिएको छ । निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस अव प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ तर निर्वाचनको परिणामकै आधारमा धेरै विचलित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । मूल कुरा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नु गर्नुप¥यो । जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्नुप¥यो ।